URichard Surname Intetho kunye neNtsapho yeMbali
Lithini Igama Lokugqibela likaRichard?
Elandelwa kwigama elinikeziweyo uRichard kunye nengqiqo "onamandla okanye onesibindi," igama likaRichard liyimvelaphi yesiJalimane, elenziwe ngamacandelo e- ric , okuthetha "amandla" kunye nobunzima , okuthetha ukuba "unamandla okanye unesibindi."
URichard ngu- 6 igama elidlulileyo kwiFransi .
Igama legama elichaziweyo : I- RICHERD, RICKARD, RICARD, RICKARD, RICHARDS, RITCHARD, RICHARDSON, RICHARDSSON, RICQUART, RIJKAARD, RICKAERT, RYCKEWAERT
Abantu abaPhezulu abaneNkampani yeRICHARD
UMaurice Richard - inkwenkwezi yaseCanada yeHockey; Umdlali wokuqala weNHL ukufikelela kwiinjongo ezingama-50 ngexesha
UCliff Richard - Umdlali wefilimu waseBrithani nomculi; wabiza ngokuthi "iBritish Elvis Presley"
Achille Richard - i-botanist yesiFrentshi kunye nodokotela
UEdouard Richard - isazi-mlando saseCanada kunye nezopolitiko
UEtienne Richard - umculi waseFransi kunye ne-harpsichordist
UFleury François Richard - umdwebi weFrentshi
UJules Richard - isiFrentshi isazi seMathematika esichaza i-Richard's paradox
UPawulos Richard - uMeya waseNew York, 1735-1739
Uphi igama leRICHARD Igama eliqhelekileyo?
Ngokubhengezwa kwebheno kwi-Forebears, igama leRichard namhlanje linomdla olunomdla kuninzi kwiTanzania, apho abantu abangaphezu kwe-90,000 babethwala ifani. Kuqheleke kakhulu kwiFransi, ukubeka njengegama elingu-9 elidlulileyo kwilizwe, naseCanada, apho linama-58. URichard ngu-511 yeyona nkcukacha ngokuqhelekileyo e-United States.
Amagama amaphepha ukusuka kwiiNkcukacha zeeNkcukacha zikawonkewonkeProfayile uchaza ukuba igama likaRichard liqheleke kakhulu kwiindawo ezinokuthi zincinci abantu abathetha isiFrentshi, kuquka iNew Brunswick nePrince Edward Island eCanada, eLouisana eUnited States, kunye nemimandla yase-Pays-de -la-Loire, iNewle-Aquitaine (eyayisakuba yiPoitou-Charentes), iLorraine, iBourgogne-Franche-Comté (eyayisakuba yiFranche-Comté), i-Centre, iBretagne ne-Champagne-Ardenne eFransi.
Izibonelelo zoGenesalogy for the Name RICHARD
Ngaba igama lakho lokugqibela linemvelaphi eFransi? Funda malunga nemvelaphi eyahlukeneyo yegama lesiFrentshi kwaye uhlolisise intsingiselo yamanye amagama aqhelekileyo aseFransi amagama.
Uphando loPhando lwase-French
Funda malunga neentlobo ezahlukeneyo zeengxelo zofuzo ezifumanekayo ekuphanduleni ookhokho baseFransi nendlela yokufikelela kuzo, kunye nendlela yokufumana apho eFransi ookhokho bakho bevela khona.
Crest Richard Family - Akusikho Oko Ucinga
Ngokuchasene noko ungayiva, akukho nto enjenge-Richard's family crest okanye ingubo yeengalo kwi-rename kaRichard. Iingubo zeengalo zinikwe abantu ngabanye, kungekhona iintsapho, kwaye zingasetyenziselwa ukusetyenziswa kuphela ngabantu abangenakuphazanyiswa inzala yomntu oye wanikwa ingubo yeengalo.
RICHARD Family Genealogy Forum
Khangela le ngqungquthela eyaziwayo yokuzalwa komnxeba weRichard igama lokufumana abanye abanokuphanda ookhokho bakho, okanye ukuthumela umbuzo wakho uRichard.
I-FamilySearch - I-RICHARD Genealogy
Hlola iziphumo ezingaphezulu kwezigidi ezili-12 ezivela kwiirekhodi zomlando kunye nezihlobo zentsapho ezinxulumene nomgca ezinxulumene nomgca onxulumene noRichard igama kunye neenguqu kwiwebhusayithi yamahhala ebanjwe yiCawa likaYesu Kristu we-Saints-Day Saints.
DistantCousin.com - RICHARD Genealogy & History Family
Hlola ii-database zolwazi zamahhala kunye neefayili zodidi lwegama lokugqibela likaRichard.
GeneaNet - Richard Records
I-GeneaNet ibandakanya iirekhodi zokugcinwa kweengxelo, imithi yentsapho kunye nezinye izibonelelo kubantu abanomntu onobumba beRichard, kunye neengcamango kunye neentsapho ezivela eFransi nakwamanye amazwe aseYurophu.
Uhlobo lweRichard Genealogy and Family Tree Page
Dlulisa amehlo kwiirekhodi zomnxeba kunye neenkcukacha ezibhalwe kwizahlulo zemveli kunye nezembali zabantu ngabanye abanobumba beRichard kwi-website ye-Genealogy Today.
ISOOD - Igama elithi & Origin
I-BRENNAN - Igama lokugqibela kunye nomvelaphi
IJIMENEZ Igama lomnqophiso kunye neNtsapho yeMbali
9 Izilwanyana zeMagical kunye neNtsapho yazo
INguqulelo entsha yeMisa yamaKatolika
IRhafu kaRhulumente waseFransi yeRhasi yeRhasi kusukela ngowe-1933
Imithandazo yokulala ngexesha lokulala kwabantwana bamaPagan
Ukubikezela iifomula zeeNyunithi zeIonic
Iingcebiso zokuKhusela nokuSebenzisana noKhuseleko lwe-Skateboard
Biography ka Harriet Tubman